सन् २०२१ को डि.भी. कार्यक्रम खुला – GoodNews24
Home/समाचार/सन् २०२१ को डि.भी. कार्यक्रम खुला
सन् २०२१ को लागि अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)का लागि आवेदन खुलेको छ । डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता असोज १५ नेपालमा स्थानीय समयअनुसार रातको ९:४५ बजेबाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ र कार्तिक १९ मा स्थानीय समयअनुसार रातको १०:४५ बजे बन्द हुनेछ ।
यस वर्ष आवेदन फारम भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्टको म्याद र इमेल ठेगाना अनिवार्य गरिएको छ । डीभीको अनलाइन www.dvlottery.state.gov फारम आफैंले निशुल्क भर्न सकिन्छ । एक व्यक्तिले एकपटक मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । एकभन्दा बढी पटक आवेदन फारम भर्ने व्यक्ति डीभीका लागि अयोग्य ठहरिने छन् । फारम भरिसकेपछि प्राप्त हुने कनफर्मेसन नम्बर सुरक्षित राख्नु पर्ने छ । नतिजा सार्वजनिक भएपछि त्यही कन्फर्मेसन नम्बरको आधारमा आफूलाई डीभी परे/नपरेको थाहा हुन्छ । यस वर्ष ५५ हजारले डीभी चिठ्ठामार्फत् अमेरिकाको भिसा पाउने अमेरिकी अधिकारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत विवरणको आधारमा कम्प्युटर सिस्टमले डीभीको लागि योग्य व्यक्तिहरुको छनोट गर्ने छ । तर डीभी पर्दैमा अमेरिकाको भिसा पाउने निश्चित हुँदैन । त्यसपछि पनि बिभिन्न सर्त र प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु पर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।